UJuan José Millás, owine umklomelo wePlaneta Award (2007) | Izincwadi Zamanje
UJuan José Millás: izincwadi
UJuan Jose Millás
Ngeminyaka ecishe ibe ngamashumi amahlanu yobungcweti, umbhali waseSpain nentatheli uJuan José Millás ungumbhali ozinikele. Njengamanje, inezincwadi ezingaphezu kwe-35, kufaka phakathi amanoveli, izindaba, izindatshana nemibiko. IValencian ivelele emkhakheni wokubhala ngawo-80s ngencwadi yakhe yesine: Iphepha elimanzi (1983). Lokhu kulandisa kwamaphoyisa kwabhalwa ngokucela komshicileli wezincwadi zezingane, futhi kusukela ekuqaleni kwayo kwaba nempendulo enhle.
Kungemva kokuphumelela kwale noveli lapho uMillás angena khona kwezobuntatheli, umsebenzi awenzayo ngesitayela sakhe sokuqala. Unikezwe imiklomelo eyishumi ngemiklomelo ebalulekile, zombili ezokubhala nezobuntatheli. Okwabo iziqu zobudokotela ezimbili Honoris causa, enikezwe Amanyuvesi aseTurin nase-Oviedo.
1.1 Izifundo nolwazi lomsebenzi
1.2 Umjaho wezincwadi
1.3 Umkhuba wobuntatheli
1.4 Amanoveli kaJuan José Millás
2 Amazwibela ezinye zezincwadi zikaJuan José Millás
2.1 Iphepha elimanzi (1983)
2.2 Abesifazane Ababili ePrague (2002)
2.3 Umhlaba (2007)
2.4 Umfazi Ohlanyayo (2014)
2.5 Impilo ngezikhathi ezithile (2019)
UJuan José Millás García wazalelwa eValencia (Spain) ngoJanuwari 31, 1946. Uqhamuka emndenini omkhulu, ungowesine ezinganeni zakwabo eziyisishiyagalolunye. Abazali bakhe kwakunguVicente Millás Mossi — owayengumsunguli wezobuchwepheshe futhi enguchwepheshe wezimboni — noCándida García. Uchithe iminyaka yakhe yobudala edolobheni langakubo, kwaze ngo-1.952 wathutha nomndeni wakhe ukuze Ukuchuma, idolobha elidumile lase Madrid.
Izifundo nolwazi lomsebenzi
Ufunde ebusuku, kwazise emini ubesebenza njengesikhashana ebhange lokonga. Iminyaka emithathu wafunda ifilosofi nezincwadi —Ngokukhethekile kwePure Philosophy— eComplutense University of Madrid, okuyi isikhathi sokushiya kamuva. Ekuqaleni ishumi leminyaka le- ama-70 ' wajoyina ihhovisi lezindaba lase-Iberia.
Ekuthomeni kwakhe wazibandakanya nezinkondlo, yize ekugcineni wagcina ezinikele ebuhleni bokulandisa. Ngo-1975, washicilela le noveli: I-Cerberus iyizithunzi; athola ngayo indondo yeSesamo ngawo lowo nyaka futhi wazuza ukuqashelwa okukhulu kubagxeki bemibhalo. Eminyakeni eyisithupha eyalandela wethula imisebenzi emibili: Umbono wabaminza (1977) futhi Insimu engenalutho (1981).
Ngo-1983, washicilela incwadi yakhe eyaziwa kakhulu: Iphepha elimanzi, inoveli ebambe izinkulungwane zabafundi. Ngemuva kwale mpumelelo, emashumini amathathu edlule uqinise umsebenzi wakhe wokubhala nge Ukulandisa okungu-16 okumenze wakufanelekela imiklomelo ebalulekile. Phakathi kwemibhalo, okulandelayo kugqama: Abesifazane ababili ePrague (2002), athola ngayo umklomelo wePrimavera; Y Izwe (2007), owine umklomelo wePlaneta (2007) noweNational Narrative (2008).
Ekuqaleni the 90 ', waqala umsebenzi wakhe wobuntatheli ephephandabeni El País neminye imithombo yezindaba yaseSpain. Kubonakaliswe ngokubhala amakholomu abizwa ngokuthi "ama-athikili". Kulomkhakha uhlonishwe kaningi, phakathi kwemiklomelo yakhe okugqamile: UMariano de Cavia Journalism (1999) noDon Quixote we-Journalism (2009).
Amanoveli kaJuan José Millás
ICerberus yizithunzi (1975)
Umbono wabaminza (1977)
Insimu engenalutho (1981)
Iphepha elimanzi (1983)
Incwadi efile (1984)
Ukuphazamiseka kwegama lakho (1987)
Isizungu bekuyiso lesi (1990)
Emuva ekhaya (1990)
Isiphukuphuku, sifile, siyisigaxa futhi asibonakali (1995)
Ukulandelana kwama-alfabhethi (1998)
Ungabheki ngaphansi kombhede (1999)
Abesifazane ababili ePrague (2002)
ULaura noJulio (2006)
Engikwaziyo ngamadoda amancane (2010)
Owesifazane ohlanyayo (2014)
Kusukela emathunzini (2016)
Indaba yami eyiqiniso (2017)
Makungabikho olele (2018)
Impilo ngezikhathi ezithile (2019)
Amazwibela ezinye zezincwadi zikaJuan José Millás
Intatheli UManolo Urbina uqala uphenyo "ngokuzibulala" kuka umngani wakhe wakudala ULouis mary, kusukela usola ukuthi ubulewe. Kuwo wonke lo hambo, ngasikhathi sinye ubhala ngokwenzeke encwadini, njengesipele uma kwenzeka okuthile kuye. Abesifazane ababili ababalulekile empilweni kamufi - uTeresa noCarolina - bazosiza uManolo ngesikhathi kuphenywa.
Efuna izinkomba, uTeresa uthola isikhwama semali esinamaphepha kanye nemibhalo ebucayi, ebandakanya usokhemisi. Konke kuqala ukuwohloka lapho uMhloli uCárdenas ethatha izintambo zenqubo. Lesi sikhulu sizothola esinye sezicucu eziyisisekelo zokuxazulula leli cala ngokuphazima kweso, kube nomphumela omangazayo futhi ongakholeki.
Iphepha elimanzi (Incwadi ka ...
En la Búsqueda yomuntu obhala i-biography yakhe, uLuz Acaso thatha iphephandaba futhi ushayisa ku igama umbhali osemusha odumile. Kakade usenqumile - egcwele izimfihlakalo - uya ehhovisi lezincwadi zombhali ayokwenza isicelo esinjalo; uyayemukela futhi ayemukele. U-vlvaro Abril (umbhali), ngokwengxenye yakhe, uzithola esemzabalazweni wangaphakathi: yize incwadi yakhe yokuqala yamenza waphumelela, ukusola okungapheli kokuba yindodana yokutholwa akumvumelanga ukuthi ajabule.
Kule ngxoxo de Luz nge-vlvaro, ulandisa amaqiniso ngempilo yakhe lokho kubonakala kuthathwe ku- izigcawu ezivela ku-movie eqanjiwe. Ngenkathi imibuthano phakathi kwalaba ababili ihamba, i-nexus iyakhula ngenxa yokuqondana okuqhubekayo. Ngaphezu kwalokho, abalingiswa abaningana bajoyina leli tulo, phakathi kwabo, uMaría José, umngani kaLuz onesiphakamiso sika-vlvaro.
Ngokuvulwa kwamakhasi kunenqwaba yezimfihlakalo, amaqiniso, ukukhohlisa kanye namaphupho amaningi aqala ukuvela ... Lezi zinto zizungeza wonke umuntu ngesikhathi sesakhiwo, esenzeka ekuthuthukiseni okumunca kuze kudalulwe isiphetho okungalindelwe muntu.
Abesifazane ababili ePrague ...
Umfana —uJuan José — ulandisa ngokombono wakhe ngobuntwana bakhe; ukuzalwa kwakhe, iminyaka yokuqala eValencia nokudluliswa komuzi wakubo kuya edolobheni laseMadrid. Ichaza okuhlangenwe nakho kwakhe endaweni yangemva kwempi, kugcwele injabulo nosizi, endaweni ebandayo, enobungani obusha nothando olungafuneki. Iqiniso okwakufanele ajwayele kulo, okuhle noma okubi.
Njengoba ekhula, ulandisa ukuthi ulahlekelwa kanjani ngabantu ababalulekile kuye Futhi zonke lezo zikhathi ezimpunga okunzima ukuzithwala Ukungabikho kwabathandekayo kunquma ukuzivumelanisa nezimo oweve eshumini nambili, ozama ukuphila ngendlela engcono kakhulu. Indaba imakwa yizikhathi eziningana zokuba khona kwayo - zendlela ingane eba yindoda kancane kancane - phakathi kweqiniso nomcabango.
Umhlaba (NF Inoveli)
UJulia ungumthengisi wezinhlanzi othatha isinqumo sokufunda kabanzi ngezilimi, lokhu ngoba que Ukhathazeke kakhulu ngomphathi wakhe uRoberto, oyisazi semilaliso. Uzifundisa ngendlela azifundise ngayo, futhi ngale nqubo abalingiswa bafika ezingxoxweni nabo abafuna izixazululo. Ngaphezu kokusebenza kumthengisi wezinhlanzi, uJulia unakekela u-Emerita, ogulela ukufa azimisele ngokufa.
Ngolunye usuku ngenkathi lo wesifazane osemusha ehambela i-Emerita, uvakashelwe nguMillás, intatheli efisa ukubika ngesifo sokubulawa kwesiguli. Lapho esazi kabanzi uJulia, ngokushesha uhlongoza ukubhala indaba yakhe. Ngokuvamile, le ndoda ibihamba ngebhulokhi lokudala. Ngendlela ebabazekayo, konke kuyashintsha ...: U-Emerita wembula impicabadala, nentatheli iyamangala.
Owesifazane osangene (NF Novel)
UJuanjo Millás ngumlobi ngubani ulandisa amasonto ayi-194 empilo yakhe, ngokususelwa kokufakiwe kwakhe kudayari. Lapho uveza ubuntu bakhe, okuthile okuqondakalayo, okujabulisayo, okubhuqayo nokukhathazayo; endaweni enqunyelwe phakathi kokuhlanya nokuhlanya. Ngokunjalo, uchaza okunye okuhlangenwe nakho, njengokuvakashela i-psychoanalyst yakhe, izinto azithandayo, izindlela zokwelashwa kanye nempilo eyedwa yansuku zonke yendoda eqaphelayo.
Isahluko ngasinye esincane silandisa izikhathi ezikhethekile, ngezimo ezingajwayelekile nezithakazelisayo. Se bethula izimo ezilula: njengokuminyana kwezimoto okubhaliwe, izinkinga zasekhaya, noma ukuwohloka kwemoto yakho. Kuyindaba eqanjiwe engaba nayo noma engenayo iqiniso elithile, ngomuntu ojwayelekile, kepha ethanda ngokweqile futhi enemibono ewubuciko.
Impilo ngezikhathi ezithile ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Biography » UJuan José Millás: izincwadi
Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela ngoJulayi